Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ Ọchịchị » Arịrịọ arịrịọ gị maka ntuli aka UNWTO na-abịa
Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • nzukọ • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Akụkọ na -agbasa na Spain • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • WTN
Otu mba ga-ebuli elu na UNWTO General Assembly na-abịa ịrịọ voite nzuzo. Nke a bụ ihe kpatara ya:
Onye ndu kacha arụ ụka nke World Tourism Organisation (UNWTO), odeakwụkwọ ukwu Zurab Pololikashvili chọrọ ụzọ abụọ n'ụzọ atọ nke mba ndị otu na Mgbakọ Mgbakọ na-abịa na Madrid ka a kwadoghachi ya maka oge 4 ọzọ.
Ọ na-ewe mba 53 ịjụ oge nke abụọ ya.
Otu mba kwesịrị ịrịọ votu nkwenye nzuzo na Mgbakọ Ọgbakọ na-abịa iji mee ka usoro a dịkwuo mma.
Ekwesịrị ịmeghachi Zurab Pololikashvili? Pịa ebe a
Ọjụjụ bụ ihe odeakwụkwọ ukwu abụọ mbụ Francesco Frangialli na Taleb Rifai n'etiti dị ka eTN isi mmalite nakwa mba ọbịa Spain, na ọtụtụ mba ndị ọzọ na-atụ anya.
Tụkwasị na nke ahụ, enwere nchegbu n'ime onwe banyere mkpagharị ụkpụrụ omume nke nzukọ a, dị ka onye ọrụ UNWTO Ethics Officer si kwuo na akụkọ ya na Mgbakọ General. Enwekwara nchegbu na-arị elu banyere ụzọ ndị na-abụghị ndị transperent nke onye odeakwụkwọ ukwu ugbu a na njikwa nke Human Resources na iwu ọrụ igbu.
UNWTO nwere obodo 159 ugbu a. Dị ka Nkeji edemede 22 nke ụkpụrụ nzukọ ahụ siri kwuo, “onye odeakwụkwọ ukwu ga-ahọpụta site na a Otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ndị otu zuru oke bịara na ịtụ vootu na Nzukọ Ezumezu.”
Nke a pụtara na mba ọ bụla na-akwado maka enweghị nkwenye nke odeakwụkwọ ukwu nke ugbu a, ga-achọ 53 na-ezighị ezi votes maka Pololikashvili iji gbochie nhoputa ya ọzọ ma ọ bụrụ na mba niile nọ na ya.
Ọjụjụ emeghị n'akụkọ ihe mere eme nke UNWTO, mana dịka isi iyi gbara ajụjụ si kwuo eTurboNews onye maara nke ọma ka nzukọ a si arụ ọrụ, “ọnọdụ ndị dị ugbu a pụrụ nnọọ iche.”
Ndị kọmitii onye isi na nso nso a họpụtara Zurab Pololikashvili na Jenụwarị 2021 maka oge 2022-2025. Kọmiti a gbakọtara na Jenụwarị, n'agbanyeghị na oge a na-emebu kwesịrị ịbụ Mee
Akụkọ sara mbara na magazin France Oghere , nke isiokwu ya
"World Tourism Organisation, ọ dị mma maka ihe ọ bụla?"
ma bipụta ya na Septemba gara aga, kwadoro ọnọdụ nke ntuli aka nke Pololikashvili nke Council Executive mere na Jenụwarị 2021 nke mbụ bipụtara ya. eTurboNews.
Iwu UNWTO na-enye na nhọpụta nke odeakwụkwọ ukwu ga-emerịrị mgbe niile n'isi ụlọ ọrụ UNWTO dị na Madrid. Dị ka akụkọ a si kwuo, kansụl ahụ kpebiri ịkwalite ntuli aka nke odeakwụkwọ ukwu ruo n'ọnwa Jenụwarị, ya mere ọ nwere ike ịdaba na ihe ngosi ahia ahia FITUR. Ekpebiri nke a na nnọkọ ọgbakọ ndị isi gara aga na Jọjia, obodo nke odeakwụkwọ ukwu. Inwe nzukọ ndị isi na Georgia welitere ọtụtụ nku anya.
FITUR emeghị na Jenụwarị, mana na Mee, yabụ arụmụka nke SG mere ka ọ bụrụ ntuli aka ya na Jenụwarị enweghị isi. Agbanyeghị nzukọ Jenụwarị n'oge oge mkpọchi COVID-19 bụụrụ ya uru doro anya, yabụ ọ jụrụ ịgbanwe ụbọchị ahụ.
Ọbụna ọ jụrụ ịgbanwe ụbọchị mgbe ndị isi UNWTO mbụ gachara Francesco Frangialli na Taleb Rifai nyefee akwụkwọ ozi mepere emepe site na usoro nkwado nke ndị tọrọ ntọala ọhụrụ Network Njem Nleta Ụwa.
Arụmụka nke abụọ bụbu odeakwụkwọ ukwu bụ ichetara nke ahụ Ntuli aka a na-emebu n'oge opupu ihe ubi, iji kwe ka Secretary na Executive Council kwadoro mmefu ego maka afọ na-esote, na-atụ anya na a ga-enwe Nzukọ Mgbakọ n'oge mgbụsị akwụkwọ.
Frangialli na Rifai rụrụ ụka na ntuli aka chọrọ nzukọ n'onwe ya ọ bụghị nke mebere.
Iwu na ụkpụrụ na-achịkwa usoro ntuli aka na-egosi na mkpa nke ụkpụrụ nke ntuli aka nzuzo, ihe ga-esi nnọọ ike ịhazi ná nzukọ ndị mebere.”
Ha rụtụrụ aka na ndị ozi agaghị aga Madrid, ọkachasị n'oge ọrịa na-efe efe. Mba dị iche iche ga-adabere na ndị nnọchi anya ha kama ndị ozi njem nlegharị anya ịnọchite anya obodo ha na ntuli aka. N'ụzọ dị mwute, nke a bụ ihe Zurab tụrụ anya ya ma mee n'ezie. Nke a bụ ikpe na-ezighị ezi maka mba ndị otu na-enweghị ụlọ ọrụ nnọchiteanya na Madrid. Naanị nke a na oge dị mkpirikpi maka ndị ọhụrụ nwere ike ịpụta na-emebi iguzosi ike n'ezi ihe nke ntuli aka ahụ.
Agha ebidola n'etiti Zurab Pololikashvili, onye na-azọ ntuli aka ọzọ, na Shaika Mai bint Mohamed al Khalifa, onye otu ezinụlọ eze Bahrain na Minister nke Culture nke obodo ahụ n'etiti 2010 na 2014, onye bụ naanị otu n'ime ndị 6 chọrọ ntuli aka. nwee ike ịnye akwụkwọ nhọpụta ya n'oge na nke ọma.
Isi mmalite dị nso na UNWTO rụtụrụ aka ugboro ugboro "oke mmebi iwu" na ntuli aka nke odeakwụkwọ ukwu ugbu a.
eTurboNews kọrọ banyere onye ọka iwu depụtara iwu UNWTO. O chere na nhoputa ndi ochichi nke 2017 maka onye ode akwukwo ukwu kwesiri ka ekwuputa na odighi nma.
Kedu ihe kpatara na odeakwụkwọ ukwu UNWTO Zurab Polokashvili emeghị nke ọma?
Nhọpụta nke onye isi nchịkwa
Enwere nchegbu n'ime ime banyere ụkpụrụ omume nke UNWTO ruo n'ókè nke onye na-ahụ maka ụkpụrụ omume nke nzukọ ahụ, Marina Diotallevi kwuru ya na akụkọ Human Resource nke na-eduga na Mgbakọ General na Madrid. Ọ na-ekwu maka "nchegbu na mwute na-arịwanye elu na omume ime ụlọ doro anya nke dị na ọchịchị UNWTO gara aga, gụnyere ihe ndị ọzọ, n'ihe gbasara nkwalite, nhazi ọkwa na nhọpụta, akwụsịla na mberede, na-ahapụ ohere zuru oke maka opacity na njikwa aka ike ".
N'ezie, n'izu a, akwụkwọ akụkọ Spanish HOSTELTUR amụtala na odeakwụkwọ ukwu ahọpụtala Zoritsa Urosevic dị ka onye isi nchịkwa nke UNWTO. N'ezie, ọnọdụ a na-eme ka ọnụ ọgụgụ ya atọ, mgbe odeakwụkwọ ukwu na onye isi nchịkwa ọzọ, Chinese Zhu Shanzhong. Nhọpụta a ga-amalite na Ọktoba 19.
Emere Council Executive ikpeazụ na Jenụwarị nke afọ a na Madrid, ọ nweghịkwa isi okwu gbasara nhọpụta a.
Onye isi nchịkwa, ọnọdụ na bụ ruo ugbu a ndọrọ ndọrọ ọchịchị, bụ onye na-achịkwa ngalaba ụkpụrụ omume, omenala na ọrụ mmekọrịta ọha na eze ugbu a; Innovation, Education na Investments; Ndekọ ọnụ ọgụgụ; Mmepe na-adịgide adịgide na ọgụgụ isi na asọmpi nke ahịa ndị njem nlegharị anya.
HOSTELTU mụtakwara na 200,000 Euro nke akwadoro maka ya "na-arụ ọrụ iji melite akụrụngwa nke isi ụlọ ọrụ", e mefuru nanị maka imeziwanye ụlọ ọrụ odeakwụkwọ ukwu. Emere ọrụ a na-enweghị akwụkwọ ọhaneze dịka iwu UNWTO chọrọ.
Na mgbakwunye, dị ka isi mmalite si kwuo, ndị ọrụ nke General Secretariat na-aga n'ihu na-arụ ọrụ telefon na ha ga-eme ya ma ọ dịkarịa ala ruo njedebe nke afọ, dị ka atụmatụ.
eTurboNews ugbu a na-ajụ ndị na-agụ:
Ekwesịrị ịmeghachi Zurab Pololikashvili maka oge nke abụọ dị ka odeakwụkwọ ukwu UNWTO?